Qaraxa makhaayadda Makka almukaramah faahfaahin | Guurdoon Free Online social media web
Qaraxa makhaayadda Makka almukaramah faahfaahin
Inta la ogyahay 2 qof ayaa dhimatay kudhawaad 10 qofna waa dhaawacmeen kadib markii gaari yar waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan uu ku qarxay banaanka maqaayad ku taal wadada makka almukarama ee magaalada Muqdisho,
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax gaari oo ka dhacay maqaayada baar Italian oo Ku taala ka soo horjeedka shaleema Somalia.
Inta la xaqiijiyay Afar qof ayaa Ku dhintay qaraxa,sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay afhayeenka gobalka banaadir.
Maqaayada uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa laga dareemayaa bur bur xoogan oo soo gaaray.
Qarax gaari loo adeegsaday ayaa caawa fiidkii waxaa uu ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxa wuxuu ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad cusub oo lagu magacaabo somali coffee taasi oo dhawaan la furay waxaana ay ku taalla dhabarka dambe ee Shineema Somalia oo ka soo horjeeda baar Italia ee Isgoyska Shaqaalaha.
Inta la xaqiijiyay Dhimashada waa 4 Ruux iyo dhaawaca 7 kale oo dhammaantood shacab ah.
Daqiiqado ka hor qaraxa inta uusan dhicin waxaa da’ay roob oo dhalinyaradii kala xareeyay qaarkood maqaayada ayey gudaha u galeen qaarna xaafaddahooda ayey aaden kadib muddo 7-8 daqiiqo laga jooga ayuu qaraxa dhacay waxaana la sheegay in gaariga qarxay uu goobta ku diyaarsanaa.
Bartilmaameedka qaraxa lama hubo halka uu ahaa waxaase xusid mudan in maqaayada uu nawaaxigeeda ka dhacay ay tahay mid aad u mashquul badan oo dhawaan la furay dhalinyaradana ay ku qaxweystaan.
Nin Turkish oo gubaya doolarka maraykanka
Toban halis ayay leedaha siigada raga
Shahwada ninka naagta waxtarka ay u leedahay
Amin arts muxuu ka rabaa Abdirahman Abdishakur
Dumarka Soomaali maxay ku qurxoon yihiin
Updated: August 5, 2018 — 5:51 pm